सधै पढ्छु मोबाइल हेरेर भन्थ्यो छोराले जब कर्तुत थाहा पाए छोराको आमाबाबु धरधरी रोए ! – Online Nepal
July 8, 2020 387
इन्टरनेटको माध्यमवाट खेलिने गेमको लतमा धेरै युवा युवती फसेका छन् । उनीहरुलाई त्यो लतवाट बाहिर निकाल्न नसकेर अभिभावक हैरान भएका छन् । जतिवेला पनि गेममै ब्यस्त हुने बालबालिका र युवायुवतीहरु असामाजिक बनिरहेका छन् । उनीहरुलाई घर वरपरको वातावरणमा के भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा छैन ।
गेमको लत यस्तो सम्म हुन्छ की मानिसले कसरी बर्बाद हुँदैछु भन्ने पनि थाहा पाउँदैन । हालै पब्जीका कारण एक युवाले आफ्नो बुवा आमाको सम्पत्ती पनि स्वाहा बनाइदिएका छन् । भारतमा कतिपय राज्यमा पब्जीलाई बन्देज गरिएको छ । युवायुवती विग्रन थाले भन्ने गुनासो आएपछि भारतमा केही राज्यमा पब्जी खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
भारतको पन्जाबमा एकजना किशोर पब्जीको लतमा यति नराम्रोसँग फसेछन् कि उनले पब्जी खेलेरै बाउआमाको २७ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको पैसा स्वाहा पारिदिए । छोराले त्यती धेरै रकम पब्जीमा उडाउँदा पनि आमाबुवाले थाहा पाएनन् ।
समाचार अनुसार इन एप पर्चेजेज तथा अपग्रेडिङका लागि मात्र १६ लाख भारु रुपैया खर्च गरिदिए । बुवा आमाले चलाउने बैंकको एकाउण्ट पनि इन्टरनेट मार्फत पहुच बनाएका उनले त्यती धेरै रकम स्वाहा पारिदिएका हुन् । बुवा आमाको ३ वटा बैंक एकाउण्टवाट उनले पैसा सकिदिए । पब्जी मोबाइलमा लत बसेका उनले एपमै पैसा खर्चका लागि बुवा आमाको तिनैवटा अकाउन्टको प्रयोग गरे ।
मोवाइलमा मात्र भुलीरहने छोराका बारेमा जतिवेला उनीहरुले ख्याल राख्न थाले त्यतीबेला पैसा उडिसकेको थियो । उनले पढ्नको लागि भन्दै मोवाइल चलाएको आमाबुवालाई बताउने गरेका थिए । पब्जी मोबाइलको इनएप पर्चेजेजका अलावा उनले गेम खेल्ने क्रममा खेल्ने साथीहका लागि समेत अपग्रेड किनिदिने गरेका थिए ।
जब ती किशोरका बाबुआमाले आफ्ना बैंक अकाउन्टबाट १६ लाख भन्दा धेरै भारु खर्च भएको देखे तब उनीहरुको होसहवास उड्यो । पछि त्यसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा छोराले नै यस्तो बदमासी गरेको खुलेको थियो ।
ती किशोरले आफ्नै आमाको मोबाइलबाट पब्जी गेम खेल्दथे । जब गेमका लागि आवश्यक रकम बैंकबाट तिर्दा प्राप्त भएको मेसेज आउथ्यो त्यो आमाले थाहा नपाउनु भनेर डिलिट गरिहाल्थे । जसका कारण उनका बाबुआमालाई छोराले त्यस्तो कृत्य गरिरहेको पत्तो थिएन । सरकारी जागीर गरेर बल्लतल्ल उनीहरुले छोराकै भविष्य र औषधि उपचारका लागि त्यो पैसा जम्मा गरेको बताएका छन् ।
Prevपूर्वराजकुमारी पूर्णिकाले बल्ल रोजिन् प्रेमी, डेटिङमा आमा हिमानीको पनि साथ !!
Nextबोल्दा बोल्दै रोए भूवन केसी, सम्रागीले लगाएको आरोपको दिए यस्तो जवाफ (भिडियो सहित)
नेपालमा अपत्यारिलो तरिकाले ठूलो संख्यामा कोरोनाका बिरामीले जिते कोरोनालाई, आज एकै दिन ८ सय २३ जना निको भएर घर फर्के
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62176)